Ireo Dingana Rehefa Mandeha Lavitra · Global Voices teny Malagasy
Ireo Dingana Rehefa Mandeha Lavitra
Voadika ny 13 Janoary 2016 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, عربي, Italiano, Español, Português, Ελληνικά, English
Lakana fingotra fanavotan'aina feno olona mitady fialokalofana eny an-dalana ho any Lesvos, Gresy. Sary: Radu Bec. Nahazoana alalana.
Ny lalana amoron-dranomasin'i Eftalou ao amin'ny nosy Lesvos, Gresy, dia ilaharan'ny hazo oliva, aviavy ary ireo fako navelan'ny vehivavy, lehilahy ary zaza madinika mitady fialokalofana mandalo eo isan'andro. Rakotra lakana fingotra tsy misy rivotra intsony, antontan’ akanjo mampitsingevana nosisihana polisitirenina, spaonjy sy ravi-kazo maina, akanjo ivelany mando nariana ary tsindraindray kilalao na fahatsiarovana nentina tany an-dranomasina ary very noho ny hamehana hanohy ny dia ny moron-dranomasina.
Ary rehefa miposaka ny masoandro ary mampanjelatra ny ranomasina Egée, feno lakana kely efa eny an-dalana ny faravodilanitra, mandroso moramora ao anatin'ny rano mahery setra. Tarihin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo hamonjy moron-dranomasina, mitsingevaheva sy mitopatopa anaty rano hatreny an-dohalika ireo lakana mitondra mpandeha, mamihina zaza, zokiolona, sakaosy voavonjy sy ny hafa. Heniky ny sentom-pamonjena izy ireo ka mifanoroka izy ireo, mifampiarahaba, mamafa ranomaso, mandohalika mivavaka na mipetraka mihovitrovitra am-pahanginana. Vita ny antso an-tariby hanomezantoky ny fianakaviana mbola any anaty toby sy fiarahamonina ao Syria, Afganistana, Libanona, Tiorka, Erytirea, Somalia sy hafa koa fa nisosa tsara ny fiampitàna, ary velona sy tafaraka izy ireo.
Safotra i Fatima, mpampianatra manan-janaka roalahy, raha nahatratra ny tora-pasika, mitomany sy miezaka mafy hiaina (hisefo). Mandohalika sy mamihina azy i Mahmoud zanany lahy 11 taona ary nesorinay ny sarondohany, mampangina azy sady manome toky azy ny zanany lahy fa velona soa aman-tsara avokoa izy rehetra ary tiany ny reniny. “Teny ambony lakana, notazomiko tato anatiko ny tahotro rehetra mba tsy ho hitan’ireo zanako lahy” hoy i Fatima manazava nony avy eo. “Saingy matotra kokoa noho ny taonany izy ireo. Manantena aho, fa any ho any, fa afaka miaina ny fahazazana izay nolavina taminy izy ireo ary afaka manavao indray ny fiainanay aho”.
Mipetraka eo ambony vato i Ahmed, mampienjera azy ny tongony mangovitra, hodidinin’ireo zanany efa mihalehibe. Mihazona ny tanany i Sawsan, zanany vavimatoa. Mandeha enina kilometatra mankany Molyvos avy eo, velombelona izy na dia eo aza ny hafanana mahery vaika ary mankafy ireo tanimboly mamokatra, ireo hazo mamony ary ireo manda simba voakojakoja tazanin-davitra izy. Nogadraina sy nodarohana tao Raqqa ireo zanany roa lahy, ary raha navotsotra izy ireo, dia tapaka ny hevitra handao an’i Siria – fanapaha-kevitra izay hitany fa mandratra, hoy izy. « Tsy nisy ny safidy hafa » hoy i Ahmed. « Nampianariko hitsipaka ny fanavakavahana ara-pivavahana sy hanaja tanteraka ny fivavahana rehetra ny zanako. Nahita maso herisetra sy habibiana tsy nahafahako miaro azy ireo amin'izany izahay ary fantatro fa tokony hiala tao izahay »
Tanora mpankafy hip-hop i Lara sy Haya, mandehandeha miaraka aminay sy ny anadahin'izy ireo. Sitrana tamin'ny fandidiana fo natrehany tamin’ny volana lasa ny rain'izy ireo, Ehab, misy holatra eo amin’ny tratrany. Mandeha mora izy ary maka aina matetika, mandra-pahatongan'ilay mpilatsaka an-tsitrapo mandresy lahatra azy mba hoentina amin'ny seza atosika, manome toky azy fa voaaro sy hanaraka azy ao akaikin'ny toerana fakan'aina ny zanany. Satria mbola manohy ny diany amin'ny lalan-tany ny vondrona ary miposaka avo kokoa amin'ny lanitra tsy mandrahona ny masoandro, tapa-kevitra handeha hilomano ilay zandriny indrindra. Nitsambikina avy eo ambony vato mbola miakanjo tanteraka izy ireo ary nitsingevana tamin'ny lamosin'izy ireo tao anaty rano efa milamina amin'izao fotoana. Mihomehy izy ireo, manao fihetsika menatra amin'ireo mpizaha tany mitanin’andro ao amoron-dranomasina, manontany tena izay eritreretin’izy ireo, sy izay fantatr'izy ireo mikasika ny vondrona samihafa, tafaraka noho ny zava-misy ary tafaray ankehitriny tamin'ny finamanana lalina noho izy ireo miara-dalana hatrany.
Mipetraka sy maka aina miaraka amin’ny havany sy namany i Canyar, mpanakanto Kiorda avy ao Kobane, Syria. Nitondra ny zavamanenony izy, amponga – valiha lava taho – sy kely hafa koa. « Fijoroako ny mozikako » hoy izy. ”Mihira aho mba hanome voninahitra ireo lavo, ireo namoy ny ainy noho ny fiarovana ny olonay, mba hankalaza ny fiainana, ny fombanay sy ny kolontsaina ihany koa. Ny hirako dia fandraisako anjara amin’ny tolon’ireo vahoakako”.
Miaraka amin'ireo vondrona mpiray dia lavitra avy ao Kabul, Kunduz ary Mazar-i Sharif i Salwaa, Afghàna mpianatry ny oniversite, be fihantrana, kinga sy mahay tenim-pirenena maro eo amin'ny faha dimiambiroapolo taonany eo ho eo, ary manampy ireo mila vonjy, . Mandika teny izy ho an’ilay mpanampy mpitsabo mpilatsaka an-tsitrapo izy raha mizaha ny tongotra manaintaina an’i Karim, Hazara iray mpampianatra an-tsekoly sady mararin'ny diabeta izay niara-nandeha tamin’ny fianakaviany nandritra ny herinandro maromaro. Feno ratra lalina ny tongony roa ka mety hiaritra fanampahan-tongotra roa izy. « Tsy vitako ny mandika izany » hoy i Salwaa. « Tsy te hanimba ny fanantenany aho.Hilaza ny marina ry zareo any amin’ny hopitaly, fa tsy vitako ny hilaza izany ».
Taty aoriana, tao ivelan’ny toeram-piantsonana mamovoka misy ireo olona vaovao tonga miandry fiara fitateram-bahoaka izay vitsy dia vitsy mba hitondra azy ireo any amin’ny toby fandraisana ao Mytilene, mampifandray anay amin’i Wissam ny tsikitsiky mahazatra, Palestinianina mpanao gazety sy monina ao amin'ny toby fialokalofana ao Yarmouk izy. Tamin'ny taona 2007 tao an-toeram-piasany no nifankahitanay farany tamin’ny fotoana mahafinaritra, mifanoroka sy mifampatsiahy izahay. Nanondro ny zanany lahy sy ireo rahalahiny teo akaikiny izy, mbola mando ny akanjon'izy ireo ary rakotry ny siran-dranomasina nandritra ny fiampitàna. « Nikorotana ambony ambany ny tontolonay– niova tao anatin’ny fotoana fohy ny zava-drehetra » hoy i Wissam.
Nanomboka nilentika ny lakan’izy ireo kanefa mbola lavitra ny moron-dranomasina ka voatery nanary ireo zavatra tsy dia ilaina tany an-dranomasina izy ireo, anisan’ izany ny sakaosy mavesatra kotsan'ny rano. « Tsy fasana ho an’ny tenanay ihany ny ranomasina ,» hoy izy nandinika, milaza ireo olona an’arivony nitady fialokalofana maty an-drano tamin'ny herintaona, « fa ho an'ny fahatsiarovanay– sarinay sy ny harenanay ary ny zavatra kely nentinay ihany koa mba hahatsiarovana ny tanindrazanay»
Andro vitsy taty aoriana, maro tamin’ireo nifanena taminay rehefa tonga tamin'ny voalohany no mbola miandry ao an-tobin'i Mytilene, ao amin'ny seranan-tsambo na matory eny an-dalana miandry taratasim-pampandrosoana ahafahan'izy ireo manohy ny dian'izy ireo indray. Manivaiva ny mahaolona ny toerana misy azy ireo, kely raha misy ny fotodrafitrasa mahaolona ao an-toerana, ary isan'andro ry zareo miaritra ora maro ao an-tseranan-tsambo, miaritra ompa sy daroka kibay tsindraindray avy amin'ny polisin'ny seranan-tsambo. “Mahamenatra avokoa izany rehetra izany” hoy i Sonia, mpianatra maritrano avy ao akaikin'i Damaskosy. “Tsy nampoizinay mihitsy izao. Nihevitra izahay fa raha velona amin'ny fiampitàna ranomasina izahay, dia izay no zava-tsarotra indrindra tamin'ny dia vita”.
Maro ireo sisintany nametrahana miaramila mbola tsy maintsy ihoarana voambara amin'ny tohon-tsofina sy tamin'ny alalan'ny vondrona karajia virtoaly. Manao fihetsika amin'ireo vahoaka reraka, mpandeha mpiray dia lanin'ny faharetana manodidina azy ireo eo an-tseranana ary miteny am-piesoesoana i Marwan, isan’ny tanora naka aina hilomano raha nandehandeha an-tongotra nankany Molyvos kosa ny fianakaviany « raha fantatro fa maikamaika fotsiny izahay mba hihitsoka eto, dia ho nijanona teny an-dranomasina elaela kokoa aho ary nijanona nankafy ny tazana manodidina teny an-dalana».
Tamin'iny alina iny, naka an'i Sonia sy ny vondrona mpiara-mianatra aminy izahay mba hanao fety ao amin'ny Pikpa, tobim-piraisankina tantanin'ny fiarahamonina ary manome fialan-tsasatra sy fialokalofana ho an’ireo marary, maratra ary indrindra ireo marefo eo amin'ireo mpitady fialokalofana. Mandihy hodidinin'ny vondrona kilongavavy izay samy miezaka handray ny tanany sy ny fifantohany i Efi, mpiara-mpandrindra sy mpilatsaka an-tsitrapo tsy mety sasatra. «Mianatra avy amin'ny tanjak'izy ireo izahay ary miezaka manorina fiarahamonina manome fahamendrehana ho anay rehetra» hoy izy. Mihira ny hiran'ny firaisankina tsy misy sisintany, maha-mpikambana, ny sambo fa tsy Frontex , ary ny fandraisam-bahiny ny tarika mpihira, mpikatroka ary mpilatsaka an-tsitrapo avy ao amin’ny tambajotra Welcome to Europe (Tongasoa eto Eoropa).
Mipetraka amin'ny tany miaraka amin'ireo ankizy sy ny ray aman-dreniny i Sonia, manijitra ny sandriny hanala reraka sy hanala vonjimaika ny vesatry ny fitsinjovana ireo andro sy herinandro maromaro ho avy. Mitsangana i Mohammed, teloambin’ny folo taona avy ao Aleppo ary naka ny fanamafisam-peo. Eo ambanin'ny lanitry ny alina mahafinaritra, hodidinin’ireo sisa velona, izy no mihira rap momba ny fiaretana sy ny faharetana ary ny halaviran’ny dian'izy ireo. Misy ny fotoana manatevin-daharana azy ny mpanatrika, mamirapiratra ny tavany.
Caoimhe Butterly dia Irlandey mpikarakara, mpikatroka ny rariny ho an'ny mpifindra-monina ary mpianatra efa nahazo diplaoma taona fahatelo. Niasa nandritra ny efatra ambin’ny folo taona tamin'ny fikambanana ara-tsosialy sy tetikasa fampandrosoana ny fiarahamonina tao Amerika latina, ny tontolo Arabo sy ny sisa izy.
6 andro izayIsraely
Firy pourcent ny Malagasy no milalao
10 Jolay 2016, 23:43